Archive du 20180427
Hanitra Razafimanantsoa “Ny vahoaka no mibaiko anay”
Nanizingizina ny solombavambahoaka Hanitra Razafimanantsoa araka ny resaka fohy nifanaovana taminy omaly hariva fa tsy hiresaka amin’ny HVM intsony rehefa avy nihaino ny fitakian’ny vahoaka, izay nambarany fa “Patron” an’ny solombavambahoaka.
Fandaminana ny krizy politika Mihetsika amin’izay ny FFKM
Mampiantso ny mpitondra fanjakana, ny mpanao politika isan-tsokajiny, ny firaisamonim-pirenena sy ny olom-pirenena hanatrika ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana atao eny amin’ny Eglizy Anglikanina eny Ambohimanoro ny alahady 29 aprily ho avy izao manomboka amin’ny 3 ora tolakandro ny FFKM.
Constant Raveloson Miantso ny MFM hijoro
Fotoana handinihana tsara izao, ary fotoana hanapahan-kevitra ry namako isany, hoy ny hafatra nataon-dRaveloson Constant ho an’ny namany ao anatin’ny MFM manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny.
Marc Ravalomanana “Tsy hanongam-panjakana aho”
Tany Mahajanga i Marc Ravalomanana omaly, ka nisy ny fifampiresahana nifanaovany tamin’ny tanora, ny TIM sy ny DISTIM, ny olona avy any amin’ny faritra, ny ben’ny tanàna,...
Hery Rajaonarimampianina Miady irery
« Raha maty aho, matesa rahavako, raha maty rahavako, … matesa ny omby… », sombiny amin’ny tsilaolaonteny malagasy iray izay mifono ny fahendren’ny Ntaolo mikasika ny atao hoe firaisankina sy fifampitsinjovan’ny mpiray donakafo fahagola io.
Olon`ny Hasin`ny Tany Hanampy tosika an`ireo depiote ho an`ny fanavotana
Manoloana ny toe-javatra misy eto amin’ny firenena ankehitriny dia mijoro ny fikambanana Olona Hasin’ny Tany (OHT) ary milaza fa handray andraikitra amin’ny fanavotana ny firenena. Manao antso avo amin’ny tompon’andraikitra rehetra sy ny mpiantsehatra amin’ny raharaham-pirenena mba tsy hisian’ny korontana mety hiteraka olana hanavesatra ny fahasahiranan’ny Vahoaka Malagasy ny OHT.
Antoko Ava “Tsy tokony hilatsaka mihitsy ny filoham-pirenena”
Mivoatra hatrany ny toe-draharaham-pirenena ary na ny antoko politika vao niorina vao haingana toy ny Antokom-BAhoaka Malagasy (AVA) aza dia nilaza fa hevitra ny hoe tokony hametra-pialana ny filoham-pirenena ankehitriny.
Ben’ny tanàna eto Analamanga Hifamory handinika ny raharaham-pirenena
Mijoro hatry ny ela ary efa niasa an- taonany maro ny fikambanan’ny Ben’ny tanàna avy eto amin’ny distrika valo mandrafitra ny Faritra Analamanga.
Fikambanana Za’Gasy “ Ravao any io CFM io”
Manoloana ny zava-misy eto amin’ny firenena ankehitriny dia naneho ny heviny toy ny rehetra ihany koa ny fikambanana Za’Gasy tarihan’ny filoha
VONDRON’OLON-TSOTRA Hihaona amin’ny olona rehetra etsy amin’ny tranompokonolona Analakely
Misokatra ho an’ny olon-tsotra rehetra manomboka anio zoma 30 aprily amin’ny 9 ora sy sasany maraina ny tranompokonolona Analakely mba handraisana torohevitra manoloana ny zava-misy eto amin’ny firenena. Ny vondron’olon-tsotra na ny VOT tarihin’ny filohany Rtoa Sarah Zoe no hitarika izany hanamafisana ny tolom-bahoaka efa misy eto amintsika.
Fédération Nationale des Agents de l’Etat Hanao hetsika fitolomana amin’ny alatsinainy
Nanao fanambarana ny FNAE ny amin’izao toe-draharaha misy eto amin’ny firenena izao fa mety ho potika sy rava ny fihavanana izay fototry ny soatoavina Malagasy.
Fampisehoan’ny tarika Exo Ho fanafahana an’i Madagasikara
Nampahafantarina tetsy amin’ny Hotely Le Pave Antaninarenina omaly ny mombamomba ilay fampisehoana hotanterahin’ny mpihira ara-pilazantsara EXO.
Ankizy voailika amin’ny fianarana Misy ny ezaka ho fampivoarana
Nifarana tamin’ny fomba ofisialy ilay tetikasa momba ny fampivoarana ny fanabeazana ny ankizy marefo izay voailika anaty rafi-pampianarana eto Antananarivo.
Akon’ny lalao Cjsoi any Djibouti
Atletisma Nandrombaka medaly volamena ny atleta zatovovavy Malagasy teo amin’ny taranja atletisma hazakazaka nifampitohy tamin’ny alarobia 25 aprily teo tao amin’ny kianja Gouled.
Baolina kitra Analamanga Resy fanindroany indray ny As Adema
Noho ny nanatanterahan’ny kaominina Antananarivo-Renivohitra ny hetsika « lalaon’Iarivo » tamin’ny farany herinandro teo dia tany amin’ny kianjan’i Carion avokoa no notontosaina ireo lalao tafiditra amin’ny andro faha-13 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’ny baolina kitra eto Analamanga ny faran’ny herinandro lasa teo.
Samy miandry izay ho tohin’ity raharaham-pirenena mafana ity hatrany ny rehetra ankehitriny. Ho tonga amin’ny tanjony dia ny fanalana ny filoha amin’ny toerany ve ny Solombavambahoakan’ny fanovana ?
Mpitatitra etsy amin’ny Fasan’ny Karana Efa nisy ny fifampiraharahana tamin’ny minisitera
Somary nangingina tato ho ato ilay fitokonan’ny mpitatitra mihazo ny lalam-pirenena fahafito entin’izy ireo hanehoana ny tsy fahazoany hifindra eny Ambohimanambola.
Profesora Mamy Ravelomanana “Kely ny fanantenana ara-toekarena ho an’i Madagasikara”
Manoloana ny savorovoro politika misy eto amin’ny firenena izay tsy mahatafarina mihitsy ny toekaren’i Madagasikara dia nanatona an’i Professeur Agregé Mamy Ravelomanana (P.M.R) mpahay toekarena ny gazety Tia Tanindrazana (T.T) ny amin’ny toe-draharaha misy sy izay ho mety vahaolana ara-politika sy ara toekarena mifanandrify amin’izany.
Fifanakalozana ara-barotra eto Madagasikara Napetraka ny tondrozotra
Nampahafantarina omaly tetsy amin’ny Carlton Anosy ny fametrahana ny tondrozotra fanamorana ny fifanakalozana ara-barotry ny samy malagasy sy ny firenen-kafa na ny AFE.
Foire Internationale de Madagascar Maro ireo mpandraharaha Malagasy efa nahazo tohana taminy
Hotontosaina ny 3,4,5 ary ny 6 mey ho avy izao indray eny amin’ny zone Forello expo Tanjombato ilay hetsika “Foire International de Madagascar” andiany faha-13 karakarain’ny agence de communication le premiere ligne.
Lehilahy roa no voatifitry ny polisy tetsy Ankorahotra –Ambanidia manakaiky ny Foibe Taon-tsaritany Malagasy (FTM) omaly vao maraim-be.
Mizara tanteraka ve ny polisim-pirenena ? Raha nanao ny fanambarany mantsy ny sendikan’ny inspektera, brigadier ary agent omaly dia novalian’ny tale jeneralin’ny polisy avy hatrany fa tsy tompon’andraikitra amin’izany ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka. Anio koa anefa dia fantatra fa hanao fihaonana amin’ny mpanao gazety ny « confédération de la police » ary hanao fanambaràna izay mbola tsy fantatra na hanamafy ny sendika na koa hiray feo amin’ny minisitera voakasika.
Loholon`i Madagasikara teo aloha Miantso ny FFKM handamin-dresaka
Mbola mitana ny sain`ny mpanara-baovao hatrany ny zavatra mety hitranga eo amin`ny tontolo politika amin`ity herinandro ity. Misesisesy, araka izany, ny fanambarana taorian'ny zava-nitranga ny sabotsy 21 aprily lasa teo.